ဘဝမှာ မပေါငျးသငျ့တဲ့ လူ ၅ မြိုး … အကွောငျး – Shwe Likes
ဘဝမှာ မပေါငျးသငျ့တဲ့ လူ ၅ မြိုး … အကွောငျး
G Shwe | June 18, 2021 | Knowledge | No Comments
လူရယျလို့ဖွဈလာရငျ လူတှေ အကွောငျးကို နားလညျထားမှသာလငျြ တျောရာကပြါလိမျ့မယျ။ ဘယျသူက ဘယျလို အကငျြ့ရှိတယျဆိုတာ သိရငျ ကိုယျ့ဘကျက ဘယျလိုပေါငျးသငျးရမယျဆိုတာ သိထားဖို့လိုအပျပါတယျ။
အပေါငျးအသငျးဆိုတာ ဘဝအတှကျ အရေးအပါဆုံးဖွဈပါတယျ။ ကောငျးတဲ့လူနဲ့ ပေါငျးသငျးတဲ့အခါ ဘဝ အတှကျ အကြိုး ရှိစပွေီး မကောငျးတဲ့သူကို အပေါငျးအသငျး လုပျမိတဲ့အခါ ဘဝတဈခုလုံးဆုံး ရှုံးစတေဲ့အထိ ဖွဈလာနိူငျပါတယျ။
ဒီလိုလူမြိုး အမြားစုဟာ မိမိအကွောငျးထကျ သူတဈပါးအကွောငျးကိုသာ စိတျဝငျးစားနတေတျတာကွောငျ့ သူ့မှာ ဘဝတကျလမျးအတှကျ ကွိုတငျစီစဉျထားတဲ့ အခကျြမြိုးမရှိပဲ နရောတိုငျး အခြိနျတိုငျးမှာ သူ့အနားရှိနတေဲ့ သူတှဆေီကို အမှိုကျတှေ သယျသယျ လာတတျကွပါတယျ။
ဘယျလိုအကွောငျးအရာမြိုးမဆို သူ့ဆီက ကွားနိူငျတဲ့အတှကျ သငျ့စိတျထဲကို အမွဲတမျးအမှိုကျတှေ လာလာပုံ နတောကွောငျ့ သငျ့စိတျကို အနှောကျယှကျဖွဈနမှော အသခြောပဲ ။
သငျတဈခုခု သူ့ထကျသာသှားပွီးဆိုရငျ အပွောအဆို အနအေထိုငျ အပွုအမူကအစ ပွောငျးလဲ သှားတတျတဲ့ လူမြိုးပါ။ဒီလိုလူမြိုးအမြားစုဟာ သငျစိတျခမျြးသာနတောကို မွငျခငျြကွတဲ့ သူတှေ မဟုတျတာကွောငျ့ သငျ့ ရဲ့ စိတျမခမျြးမွမှေု့တှကေိုပဲ အမွဲတမျးကွားခငျြနတေတျတဲ့သူတှပေါ။
ဒါကွောငျ့ သငျကောငျးကောငျး ဆိုးဆိုး သငျ့အနားမှာ အမွဲတမျး မြှဝခေံစားမပေးနိူငျတဲ့အတှကျမိတျဆှအေနနေဲ့ သငျ့ရဲ့ အခြိနျတှကေို ယုံကွညျမှု တှကေို ခမြသုံးသငျ့ပါဘူး…။
ဒီနေ့ ပွုံးပြျောပွီး စကားတှဖေျောရှနေပေမေယျ့ နောကျတဈနမှေ့ာ ကိုယျ့ဘကျက ဘာမှမသိရပဲ စိတျဆိုး စကားမပွောခံရတာမြိုးက နရေအတျောခကျတဲ့ အရာပါ။ ဒီလိုမြိုးသငျ ခဏခဏ ကွုံဖူးပါသလား ကြှနျမကတော့ ကွုံဖူးပါတယျ…
သူချေါခငျြတဲ့အခါ ကောကျကာ ငငျကာ ချေါတတျပွီး သူစိတျမလိုတော့တဲ့အခါ ရနျသူကွီးလို နရေတာကွီးက အပေါငျးအသငျး အဖွဈနဲ့ ဆကျပေါငျးလို့ မရတဲ့ ဆကျဆံရေးမြိုးဖွဈတဲ့အတှကျ ရှောငျကညျြ ပေါငျးသငျးသငျ့တဲ့ သူမြိုးပါပဲ…။
ဒီလို လူမြိုးတှဟော ဘဝမှာ အမွဲတမျး စိတျမောလူမောနဲ့ နတေတျကွပွီး သူတို့ အနားရှိတဲ့ သူတှကေိုပါ စိတျပနျး လူပနျး စပွေီး စိတျကိုလေးလံစပေါတယျ။ တဈခုခုလုပျခါနီးမှာ မဖွဈသေးတဲ့ အရာအပျေါ ကွိုတငျ ပူပနျနတေတျပွီး ဖွဈပွီးသားအရာတှကေိုလညျး ခဏခဏ ပွောရငျး ညညျးတှားနတေတျတဲ့ သူတှပေါ သူတို့အနား ရှိတဲ့ သငျကတော့ ဘဝတှပေါ လေးလံလာပွီး စိတျညဈမှုတှအေမွဲတမျး လကျဆငျ့ကမျး ရနမှောဖွဈလို့ မပေါငျးသငျးတာ အကောငျးဆုံး ပါပဲ။
၅…မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှု လှနျကဲနသေူ
ဒီအလုပျမှာ ငါမရှိရငျ မဖွဈပါဘူး ဆိုပွီး အမွဲတမျး သူ့ဂုဏျသူဖျောနတေတျတဲ့သူ။သူမရှိရငျ ဘာမှ အဆငျမပွဘေူးဆိုတဲ့ လသေံနဲ့ တဈခွားသူတှအေပျေါမှာ အထကျစီးကကြ ဆကျဆံတတျတဲ့သူ…ဒီလိုလူ အမြားစုဟာ မိမိဘယျလောကျ ကောငျးအောငျ လုပျလုပျ သူ့လောကျအဖွဈမရှိဘူးဆိုတဲ့ တဈလှဲခံယူခကျြနဲ့ တဈဖကျသာအပျေါ ယုံကွညျမှု မဲ့အောငျ မလေးမစားပွုမူတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျဟာလဲ သူနဲ့အတူရှိတဲ့အတှကျ သငျ့ဘာလုပျလုပျ ယုံကွညျမှု ရှိမနတေဲ့အတှကျ သူ့အပျေါထားတဲ့ အပေါငျးအသငျး ဆကျဆံရေး ကလဲ သူ့အတှကျ အသုံးဝငျမှာမဟုတျပါဘူး….
ဒါကွောငျ့ ဘဝမှာ ဘယျလိုလူမြိုးက ဘယျလိုအကငျြ့ရှိတယျဆိုတာ သိရငျ ရှောငျသငျ့ရငျရှောငျ မရှောငျခငျြရငျ အခွအေနကွေညျ့ပွီးပေါငျးသငျးတတျဖို့က အဓိကကပြါတယျ…။
လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် လူတွေ အကြောင်းကို နားလည်ထားမှသာလျင် တော်ရာကျပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်လို အကျင့်ရှိတယ်ဆိုတာ သိရင် ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လိုပေါင်းသင်းရမယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အပေါင်းအသင်းဆိုတာ ဘဝအတွက် အရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့လူနဲ့ ပေါင်းသင်းတဲ့အခါ ဘဝ အတွက် အကျိုး ရှိစေပြီး မကောင်းတဲ့သူကို အပေါင်းအသင်း လုပ်မိတဲ့အခါ ဘဝတစ်ခုလုံးဆုံး ရှုံးစေတဲ့အထိ ဖြစ်လာနိူင်ပါတယ်။
ဒီလိုလူမျိုး အများစုဟာ မိမိအကြောင်းထက် သူတစ်ပါးအကြောင်းကိုသာ စိတ်ဝင်းစားနေတတ်တာကြောင့် သူ့မှာ ဘဝတက်လမ်းအတွက် ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ အချက်မျိုးမရှိပဲ နေရာတိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ သူ့အနားရှိနေတဲ့ သူတွေဆီကို အမှိုက်တွေ သယ်သယ် လာတတ်ကြပါတယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးမဆို သူ့ဆီက ကြားနိူင်တဲ့အတွက် သင့်စိတ်ထဲကို အမြဲတမ်းအမှိုက်တွေ လာလာပုံ နေတာကြောင့် သင့်စိတ်ကို အနှောက်ယှက်ဖြစ်နေမှာ အသေချာပဲ ။
သင်တစ်ခုခု သူ့ထက်သာသွားပြီးဆိုရင် အပြောအဆို အနေအထိုင် အပြုအမူကအစ ပြောင်းလဲ သွားတတ်တဲ့ လူမျိုးပါ။ဒီလိုလူမျိုးအများစုဟာ သင်စိတ်ချမ်းသာနေတာကို မြင်ချင်ကြတဲ့ သူတွေ မဟုတ်တာကြောင့် သင့် ရဲ့ စိတ်မချမ်းမြေ့မှုတွေကိုပဲ အမြဲတမ်းကြားချင်နေတတ်တဲ့သူတွေပါ။
ဒါကြောင့် သင်ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး သင့်အနားမှာ အမြဲတမ်း မျှဝေခံစားမပေးနိူင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ အချိန်တွေကို ယုံကြည်မှု တွေကို ချမသုံးသင့်ပါဘူး…။
ဒီနေ့ ပြုံးပျော်ပြီး စကားတွေဖော်ရွေနေပေမယ့် နောက်တစ်နေ့မှာ ကိုယ့်ဘက်က ဘာမှမသိရပဲ စိတ်ဆိုး စကားမပြောခံရတာမျိုးက နေရအတော်ခက်တဲ့ အရာပါ။ ဒီလိုမျိုးသင် ခဏခဏ ကြုံဖူးပါသလား ကျွန်မကတော့ ကြုံဖူးပါတယ်…
သူခေါ်ချင်တဲ့အခါ ကောက်ကာ ငင်ကာ ခေါ်တတ်ပြီး သူစိတ်မလိုတော့တဲ့အခါ ရန်သူကြီးလို နေရတာကြီးက အပေါင်းအသင်း အဖြစ်နဲ့ ဆက်ပေါင်းလို့ မရတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ရှောင်ကျည် ပေါင်းသင်းသင့်တဲ့ သူမျိုးပါပဲ…။
ဒီလို လူမျိုးတွေဟာ ဘဝမှာ အမြဲတမ်း စိတ်မောလူမောနဲ့ နေတတ်ကြပြီး သူတို့ အနားရှိတဲ့ သူတွေကိုပါ စိတ်ပန်း လူပန်း စေပြီး စိတ်ကိုလေးလံစေပါတယ်။ တစ်ခုခုလုပ်ခါနီးမှာ မဖြစ်သေးတဲ့ အရာအပေါ် ကြိုတင် ပူပန်နေတတ်ပြီး ဖြစ်ပြီးသားအရာတွေကိုလည်း ခဏခဏ ပြောရင်း ညည်းတွားနေတတ်တဲ့ သူတွေပါ သူတို့အနား ရှိတဲ့ သင်ကတော့ ဘဝတွေပါ လေးလံလာပြီး စိတ်ညစ်မှုတွေအမြဲတမ်း လက်ဆင့်ကမ်း ရနေမှာဖြစ်လို့ မပေါင်းသင်းတာ အကောင်းဆုံး ပါပဲ။
၅…မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု လွန်ကဲနေသူ
ဒီအလုပ်မှာ ငါမရှိရင် မဖြစ်ပါဘူး ဆိုပြီး အမြဲတမ်း သူ့ဂုဏ်သူဖော်နေတတ်တဲ့သူ။သူမရှိရင် ဘာမှ အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ လေသံနဲ့ တစ်ခြားသူတွေအပေါ်မှာ အထက်စီးကျကျ ဆက်ဆံတတ်တဲ့သူ…ဒီလိုလူ အများစုဟာ မိမိဘယ်လောက် ကောင်းအောင် လုပ်လုပ် သူ့လောက်အဖြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ တစ်လွဲခံယူချက်နဲ့ တစ်ဖက်သာအပေါ် ယုံကြည်မှု မဲ့အောင် ​မလေးမစားပြုမူတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာလဲ သူနဲ့အတူရှိတဲ့အတွက် သင့်ဘာလုပ်လုပ် ယုံကြည်မှု ရှိမနေတဲ့အတွက် သူ့အပေါ်ထားတဲ့ အပေါင်းအသင်း ဆက်ဆံရေး ကလဲ သူ့အတွက် အသုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး….
ဒါကြောင့် ဘဝမှာ ဘယ်လိုလူမျိုးက ဘယ်လိုအကျင့်ရှိတယ်ဆိုတာ သိရင် ရှောင်သင့်ရင်ရှောင် မရှောင်ချင်ရင် အခြေအနေကြည့်ပြီးပေါင်းသင်းတတ်ဖို့က အဓိကကျပါတယ်…။
လေးစားစွာဖြင့် ❤❤❤ MayHsu (ရာမညမြေ)